Coronavirus: "Keliya waa walbahaar, walwal, iyo walaac" - BBC News Somali
Coronavirus: "Keliya waa walbahaar, walwal, iyo walaac"
Dhibaatada coronavirus ka dhalatay waxay saameyn ba`an ku yeelatay da`yarta qaba xaaladaha caafimaadka walwalka badan, sida lagu sheegay qiimeyn la sameeyay. Isbeddelka nolosha, xiritaanka iskuullada iyo imtixaanaadka la hakiyay ayaa arrintaasi qeyb ka qaadanaya.
Da`yarta ku dhow xilliga qaangaarka, waxaa ku adag in xorriyadda laga qaado. Gabar lagu magacaabo Ligia iyo qoyskeeda ayaa karantiil ku jiray tan iyo 18-kii March, sababtoo ah hooyadeed waa xaamilo culus.
Ligia oo ahayd qof mar walba jecel inay dibadda u baxdo, saaxiibbadeed la kulanto isla markaana shaqeyso, waxay caqabad u aragtaa inay guriga kula xayirnaato afar qof.
"Tan iyo markii aan karantiilka galay walbahaarkeyga wuu kordhay," ayay tiri Ligia. "Markasta si aan la fileyn ayay u dhacdaa. Waxaan dhib ku qabaa neefsashada iyo inaan si habboon u fekero."
Arrinta ugu daran waxay ahayd markii ay dowladda hakisay imtixaanaadka ardayda heerka A-ga, ee ay iyadu isku diyaarineysay.
"Runtii wax aad u adag ayay ahayd. Waan ooyay. Saameyn weyn ayay igu yeelatay," ayay tiri. "Waxay iila mid ahayd aniga oo ka qeybgalaya tartanka oroddada kaddibna taagan safka bilowga iyaguna ay xisaabinayaan, 3, 2, 1 - kaddibna ay ii sheegeen inaysan qaban doonin tartanka."
Iskuulku wuxuu qeyb ka ahaa nolosha Ligia, sidaas darteed waxay sheegtay inay ku adag tahay inay taas iska illowdo.
"Iskama celin karo inaan baxo. Waxaan maalmahayga ku qaataa wax akhris."
Way adag tahay inaad dareento dhiirranaan haddii aan la qaadeynin imtixaanka aad isku diyaarineyso, balse Ligia ayaa heshay qaabab ay wax uga beddesho xaaladdeeda caafimaadka maskaxda.
"Subixii waxaan hagaajiyay sariirteyda, si aan dib ugu noqon. Waxaan isku dayaa inaan si fiican u neefsado iyo inaan dhegeysto muusiko," ayay tiri.
"Dhanka kale waxaan isku mashquuliyaa in naqshadeynta aan ka barto online-ka, aniga oo is baraya wax i dareensiinaya: 'Haa, sidan keligey waan sameyn karaa.'"
Naomi, oo 21 jir ah, oo ka soo jeedda Cardiff, UK, ahna ardayad barata cilmu-nafsiga kuna jirta sannadkeedii ugu dambeeyay, ayaa sheegtay in walbahaarkeeda uu kordhay sababo la xiriira coronavirus.
Imtixaanaadkeedii ugu dambeeyay waa la hakiyay, inkastoo casharrada iyo imtixaannada laga sameeyo online-ka, isbeddelka yimid iyo qaabka loo bixiyo darajada imtixaanka ayaa saameyn ku yeeshay.
Waxyaabihii ay sameyn jirtay si ay u xakameyso xaaladdeeda, sida inay sameyso tabarrucaad, iyo waxyaabaha kale ee ku qasbayay inay guriga ka baxdo haatan ma sameyn karto. Sidaas darteed waa inay la timaaddaa siyaabo kale.
Naomi ayaa u aragta in joogteynta qoraalka dhacdooyinka ay la kulanto ay caawineyso, iyadoo adeegsaneysa erayada sida: Maxaa sababay inaan sidan dareemo? Maxaan manta ku mahdinayaa? "Su`aalahaas ayaa iga caawinaya inaan ka fekero waxa aan maalintii qabtay iyo wixii wanaagsanaa, iyo sidoo kale inaan qoro waxyaabaha aan ka walaacsanahay," ayay tiri.
Qoraalka shaqsiyadeed ee Naomi ay isku caawiso
Waxa kale ee wanaagsan ayaa ah dareenka bulsho ee uu abuuray coronavirus. "Dhammaanteen waan ka simannahay xaaladdan waana wax fiican inaad ogaato inay jiraan dad dareemaya walaacaas," ayay tiri.
Isla mar ahaantaas, waxay ka walaacsan tahay in laga yaabo in la ilaabo dadka iyada oo kale ah, ee muddada dheer qaba dhibaatooyinka caafimaadka maskxada.
Daraasad ay sameysay hay`adda Young Minds ayaa muujineysa in xanuunka safmarka ah ee coronavirus uu saameyn ballaaran ku leeyahay dadka qaba xaaladaha caafimaadka maskaxda. Inkastoo ay ogyihiin baahida loo qabo tallaabooyinka la qaaday ee lagu xakameynayo fayraska, haddana taasi ma aysan yareyn saameynta, sida lagu sheegay warbixinta.
Dad badan oo ka qeyb qaatay daraasadda ayaa sheegay in walbahaarkooda uu kordhay, inay dhibaato ku qabaan hurdada la'aanta, walaac iyo inay ku fekeraan inay waxyeello u geystaan naftooda.
Dadka ka shaqeeya waaxda caafimaadka maskaxda ee da`yarta ayaa sii wada taageerada ay u fidiyaan dadkaas, sida ay sheegtay hay`adda.
"Waxay isku dayayaan inay gaaraan da`yarta, inkastoo kulamada fool ka foolka ah la joojiyay, in la gaaro meelaha miyiga ahna ay adag tahay," ayay tiri Emma Thomas, oo ka tirsan YoungMinds.
Urur kale ayaa dareemay isbeddel ka dhashay coronavirus. Ururka Shout ayaa adeegga farriin isu diridda oo bilaash ah siiya dadka ku jira dhibaatada. Toddobaadkii la soo dhaafay, waxaa kordhay dadka la soo xiriiraya.
Qiyaastii 70% boqolkiiba dadka isticmaala adeeggooda waxay ka yar yihiin 25 sano, waxayna aad uga sheekeystaan arrinta ku saabsan coronavirus, haatan coronavirus wuxuu qiyaastii 25% ka yahay dhammaan wada hadallada maalinlaha ah. Waxaa intaas dheer, waxay arkeen koror dhanka wada sheekeysiga la xiriira walbahaarka.
"Keliya waa walbahaar, walbahaar, walbahaar," ayay tiri Amy, oo ka tirsan Shout.
Amy ayaa sheegtay in dadka ku jira dhibaatada ay ku adag tahay inay xitaa qabtaan telefoonka, sidaas darteedna farriin isu diridda ay u fududdahay. Waxay da`yarta ku dhibban la qabsiga waayaha is beddelay ka caawisaa inay helaan siyaabo kale oo ay noloshooda ku maareeyaan.
"Haddii aysan jirin dhaqan joogto ah, waxaan ogahay in dhaqamo badan oo xun ay imaanayaan," ayay tiri Amy, oo qudheeda la kulantay dhibaatooyin dhanka caafimaadka maskaxda ah.
Tan iyo intii bandowga la soo rogay, John oo 18 jir ah, kana soo jeeda Waqooyiga London, waxaa ku adkaatay inuu iska ilaaliyo walbahaarka.
Qoyskiisa ayaa ku jiray karantiil tan iyo 15-kii March, kaddib markii hooyadiis, oo ka shaqeysa iskuul, ay la xanuunsatay wax looga shakiyay Covid-19.
In lagu qasbay inuu guriga joogo waxay saameyn ba`an ku yeelatay caafimaadka maskaxda John.
"Caadi ahaan, haddii aan si kale dareemayo, waan iska bixi jiray si aan isaga saaro fekerka xun," ayuu yiri.
"Bas ayaan raaci jiray waddada ayaana ku dhici jiray. Balse taas hadda ma sameyn karo. Waxaan dareemayay dhibaato dhanka caafimaadka maskaxda ah, ma awoodo inaan si fudud uga soo kabto."
John ayaa muddo ka maqnaa iskuulka sababo la xiriira dhibaato dhanka maskaxda ah, wuxuuna go`aansaday inuu ku noqdo sannadka 13-aad ee iskuulka. Xiritaanka iskuulkiisa ayaa caawiyay sababtoo ah dhammaan waxbarashada waxaa laga sameyn karaa online-ka, wuxuuna door bidayaa in qaabkan wax loo barto.
Si kastaba, weli ma uusan awoodin inuu la kulmo la taliyihiisa, sababo la xiriira xayiraadda, taas ayaana walwal ku haysa. "Ma doonayo inay xaaladdeydu ka sii darto," ayuu yiri.
Wuxuu aad isugu dayaa inuu ka baxo qolkiisa jiifka, si uu habeenkii hurdo fiican u helo.
"Haddii aad si joogto ah ugu dhex fekereyso oo aad mashquul ku tahay qolkaaga jiifka, marka aad dooneyso inaad seexato, waxaa runtii maskaxdaada qabsanaya fakradahaas. Isku day in aad aaddo fadhiga ama beerta haddii aad awooddo. Waxaan dareemayaa inay taas i caawineyso."
Chloe oo 13 sano jir ah waxay hagaajinta qolkeeda jiifka ku soo jeedday ilaa saqdii dhexe, si ay isku mashquuliso.
"Marka ay wax bilowdo way ku sii adkeysataa," ayay tiri hooyadeed, Julie Cambridge. Qoyska ayaa is karantiilay sababtoo ah Julie waxay mas`uul ka tahay gabadheeda iyo carruurta ay ayeeyada u tahay, oo ku nool meel aan gurigooda ka fogeyn.
Chloe, oo ah gabadheeda ugu yar, waxay qabtaa xaaladda ADHD iyo walbahaar, tan iyo intii iskuullada la xirayna waxay "ka boodeysay derbiyada", ayay tiri Julie. Waa qof aad u jecel cayaaraha waxayna aadi jirtay bannaanka si ay u soo oroddo amaba ula kulanto saaxiibbadeed.
"Hadda waxaan dareemayaa caajis," ayay tiri Chloe. "Waxaan doonayaa inaan bannaanka u baxo sababtoo ah waan ka baqayaa inaan guriga ku xirnaado."
Waxay dhegeysataa muusiko, iyadoo saaxiibbadeed kala xiriirta baraha bulshada isla markaana wax ka barata online-ka. Balse xaaladdeeda walbahaar ayaa ka sii dartay. "Si fudud ayaan isku beddelaa, oo aan ula soo baxaa dabeecad aan fiicneyn," ayay tiri.
Si taas ka duwan, gabadha 16 jirka ah ee ay Julie dhashay, Jade, ma aysan jecleyn inay bannaanka aaddo. "Tan iyo dugsiga hoose, guriga ayay imaan jirtay, maalin walbana waxay qaban jirta shaqada guriga," ayay tiri Julie.
Balse Jade waxaa walwal ku abuuray imtixaankeedii GCSE ee la hakiyay. "Waan carooday, runtii, aad baan u walaacay," ayay tiri Jade. "Dadaal badan ayaan geliyay imtixaannadaas, si fiican baana isugu diyaariyay. Hadda xitaa ma heleyno fursadda."
Waxyaabaha aad sameyn karto si aad u ilaaliso caafimaadka maskaxdaada adigoo guriga jooga
Is ilaali oo joogtee xiriirka - Iskarantiilka micnihiisa maaha inaad jarto dhammaan xiriirka, xaqiiqdii, aad bay muhiim u tahay in la aad hadasho waxna dhegeysato, in la isla wadaago sheekooyinka iyo talooyinka, xiriirna aad la lahaado dadka waxtarka kuu leh.
Garowso waxyaabaha wanaagga ku dareensiinaya - Inaad cunto raashiid caafimaad leh, inaad soo lugeyso amaba jimicsi sameyso ayaa kaa caawin kara inaad wanaag dareento. Inaad eegto quruxda bannaanka daaqaddaada amaba aad guriga agtiisa ku soo lugeyso.
Ka yara naso wararka - Warka aan dhammaadka lahayn ee ka soo baxaya warbaahinta iyo dadka baraha bulshada isticmaala ayaa noqon kara kuwo kaa tan badiya. Kala soo bax hal meel oo la isku halleyn karo oo aad wararka ka heli karto, maalintiina hal jeer oo keliya booqo.
La wadaag dadka sida aad dareemeyso - La hadal dadka aad jeceshahay iyo saaxiibbadaada. Hadalku wuxuu wanaajinayaa xaaladdeenna wuxuuna naga caawinayaa inaad fiicnaan dareenno xilliyada adag.
Soco - La imow hab aad ku jimicsan karto maalin walba. Way fiican tahay in la lugeeyo, la ordo ama baaskiil la kaxeeyo, haddiiba aad ka fogaaneyso dadka kale.
Joogtee wax caadi kuu ah maalin kasta - Waxaa laga yaabaa inay u muuqato mid aan micno sameyneyn balse waxay kaa caawineysaa in aad maalinta isku dhaafiso. Seexo soona toos xilli isku mid ah, si joogto ah wax u cun, qubeyso, iska beddel dharka, hawo nadiif ah qaado, waqti la qaado saaxiibbadaa, howlaha guriga qabo. Waqti aad ku nasatana sameyso.
La imow hab aad ku nasato - Inaad hesho waxyaabo nafis ku dareensiinaya, adigoo meel ka dhigaya waxa aad ka walbahaareyso, isla markaana diiradda saaraya inaad nasato ayaa ah waxyaabaha ku caawin kara. Inaad is maaweeliso adigoo daawanaya filim, barnaamijyada TV-ga, akhrinaya amaba dhegeysanaya muusik, ayaa kaa caawin kara inaad iska illowdo waxyaabaha ku walaacinaya.
Waxaa laga soo xigtay: Sarah Kendrick, oo ku takhasustay cilmu-nafsiga kana tirsan Shout
Coronavirus: Sawirrada daafaha caalamka ee toddobaadka
Muuqaal, Coronavirus siduu u saameeyey hasaawaha